Dib-u-eegista Kuleylka Degdegga ah ee Micoe Balakoonka Ku-Kaydinta Biyaha Tamarta-Kaydinta "Smart PRO
Bogga ugu weyn / blog / Dib-u-eegista Kuleyliyaha Degdegga ah ee Micoe Balcony Tamarta Kaydinta Biyaha Tamarta “Smart PRO
Dib-u-eegista Kuleyliyaha Degdegga ah ee Micoe Balcony Tamarta Kaydinta Biyaha Tamarta “Smart PRO
2021 / 08 / 21 Qoondayntablog 1715 0
Xilliga xagaaga dufan leh, si aad u sagootiso urta dhididka, waa inaad qubays ku raaxaysataa! Haddii aad rabto inaad maydho qubays xanuun badan, waxaad u baahan tahay biyo kululeeye tayo sare leh oo leh kuleyl degdeg ah, heerkul joogto ah, iyo mug weyn oo biyo ah. Maanta, waxaan kuu keenay qubeyska ugu wanaagsan ee la doorbiday-Micoe balakoonka kululeeyaha degdegga ah ee balakoonka tamar-badbaadinta biyaha kululeeyaha “Smart Pro”. Maanta, waxaan kuu keenay qubeyska ugu fiican ee la doorbido-Micoe deg deg u kululeeyaha balakoonka kululeeyaha biyaha badbaadiya tamarta “Smart Pro”. Smart Pro oo leh laba-koronto-sawir leh ayaa ku siin kara biyo kulul maalintii oo dhan, si aad u qubeysato wakhti kasta? Aan eegno!
Micoe kululaynta balakoonka kululaynta biyaha kululaynta tamarta badbaadisa “Smart Pro”
Kuleyliyaha kuleyliyaha biyaha korontada ee dhaqameed, waxaad u baahan tahay inaad sugto xoogaa. Kuleyliyaha biyaha qoraxda wuxuu ka baqayaa maalmo daruuro leh. Sideen ku gaari karnaa qubeys degdeg ah oo nasasho leh? Smart Pro ayaa na siinaya jawaabta. Waxay leedahay wax-qabadkan soo socda: laba-koronto-koronto, kulayl joogto ah iyo raaxo, biyo kulul isla marka aad shiddo, iyo siddeed jeer awood dheeraad ah (heerkulka gelitaanka biyaha qasabaddu waxay u baahan tahay in lagu hayo 24 ℃). Waad dhaqi kartaa markasta oo aad rabto cimilo kasta!
Waxay leedahay guddi siman oo qorrax leh oo leh filim titanium buluug ah. Waxay leedahay xuduud dibadeed oo hal-xabbad ah. Waxay leedahay lakab xuub fidsan oo leh 94% saamiga nuugista kuleylka si loogu ururiyo kuleylka wax ku oolka ah iyada oo aan lumin daqiiqad kasta oo tamarta kuleylka ah! Gudaha, Smart Pro wuxuu adeegsadaa 8 tuubooyin qulqulaya oo u janjeera iyo naqshadaynta D-biibiilaha. Dhuumaheeda waxaa lagu rakibay si toos ah, taas oo hagaajin karta waxqabadka gudbinta kuleylka 5% oo si xoog leh u aruurin kara kuleylka. Oo markay cimiladu xun tahay, waxay si otomaatig ah u shidaysaa kulaylinta korontada. Waxay leedahay laba-koronto-koronto, oo biyaha kulul ka dhigi kara kuwo ku filan. Tani waxay qancin kartaa baahidaada inaad ku qubeysato si joogto ah adiga iyo qoyskaaga.
Markaan qubeysaneyno, waxaa laga yaabaa inaan la kulanno dhibaatada sida cad u kululeeyaha biyuhu u shidan yahay, laakiin marka qasabadda la shido, weli waa inay biyo qabow soo saartaa muddo ka hor intaan la helin biyo kulul. Xaaladdan, sidee loo xalliyaa? Micoe's Smart Pro wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda biyaha qabow ee eber ee ugu horreysa. Oo markay cimiladu xun tahay, waxay si otomaatig ah u shidaysaa kulaylka korontada. Waxay leedahay laba-koronto-koronto, oo biyaha kulul ka dhigi kara kuwo ku filan. Tani waxay dabooli kartaa baahiyahaaga qubayska joogtada ah ee qoyskaaga.
Bamka wareegga iyo moduleka awoodda kululaynta oo degdeg ah
Baadhitaan dhab ah ka dib, marka hawsha eber wareegga biyaha qabow la daarto, heerkulka biyaha ayaa lagu dejiyaa 42 ℃. Ka dib markii aad shiday qubeyska ilaa 4 sekan, heerkulka biyaha ayaa gaaray 41.8 ℃. Uma baahnid inaad sugto haddii aad rabto qubays kulul. Haddii aadan shidin hawsha wareegga biyaha qabow eber, heerkulka hore ee qubaysku waa qiyaastii 24 ℃. Haddii loo kululeeyo 41.8 ℃, waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa 40 ilbidhiqsi.
Intaa waxaa dheer, Micoe's Smart Pro sidoo kale wuxuu leeyahay isla tiknoolijiyada madow ee 8 jeer ka awood badan. Waxay buuxin kartaa kulaylka wakhti kasta inta aad isticmaaleyso. Waxaa mar kale lagu lammaaniyaa awood weyn oo ah 80 litir oo ah dahaarka gudaha, kaas oo gaara 8 jeer oo kororka awoodda ah. Waxay bixisaa ugu badnaan ilaa 640 litir oo biyo kulul ah si joogto ah! Xataa haddii qoyska oo dhami ay marba mar qubeystaan, isla xaddi biyo kulul ah ayaa si fudud loogu raaxaysan karaa!
Imtixaan wax ku ool ah
Si aad u maydhato, heerkulka biyuhu waa inuu ahaadaa mid deggan oo ku filan. Si loo xaqiijiyo wax -qabadkeeda heerkulka joogtada ah, waxaan u dejinnay heerkulka kululeeyaha biyaha 44 ℃. Tijaabi heerkulka biyaha 2 daqiiqo kasta. Shan baaritaan kadib, waxaan helnaa xogta lagu muujiyay shaxanka (qalooca isbedbedelka heerkulka biyaha). Sida aad arki karto, isbeddelka heerkulka biyaha ee ± 0.5 ℃, isla waxqabadka aad u fiican.
Sheegtay inay tahay kulayl degdeg ah, runtii waxay samayn kartaa kulayl degdeg ah? Waxaan dhab ahaan ku tijaabinnaa heerkulbeegga! Sida aad ku arki karto shaxda hoose, shid biyo kululeeyaha oo heerkulka biyaha ka dhig 40 ℃. Intaa ka dib, heerkulka biyuhu wuxuu gaaray 39.2 ℃ qiyaastii 3 ilbidhiqsiyo markii la shiday qubeyska, taas oo ku filan in la buuxiyo shuruudaha qubayska iyada oo aan la sugin.
Qoraallada qoraalka: Imtixaanka kululaynta degdegga ah
Saamaynta kululaynta Micoe Smart Pro waxay si buuxda u buuxinaysaa shuruudahayaga, ka warran xakamaynteeda? Marka la eego jirka, waxaa lagu qalabeeyay shaashad taabasho caqli leh oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u hagaajisid heerkulka hore oo aad u arki karto heerkulka iyo macluumaadka kale badhamada.
Sidoo kale, waxaad sidoo kale ku xakamayn kartaa meel fog codka adigoo adeegsanaya Tmall Genie ama soo degsashada barnaamijka moobiilka. Tani waa mid aad u habboon! Marka waalidku garan waayaan sida loo xakameeyo kululeeyaha biyaha, waxay daari karaan kululeeyaha biyaha iyagoo la hadlaya Tmall Genie. Tani waxay waalidiintaada u fududaynaysaa inay qubays kulul ku maydhaan. Ka dib markaad haysato maalin mashquul ah, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa taleefankaaga si aad u xakameyso kuleyliyaha biyaha meel fog kahor intaad gurigaaga ku sii socoto. Markaad guriga timaadid, waad qubaysan kartaa, miyaanay fiicnayn?
Guud ahaan, kuleylka degdegga ah ee Micoe kululeeyaha kululeeyaha biyaha keydinta tamarta “Smart Pro” wuxuu ka adkaadaa cilladaha kululaynta ee kuleyliyaha dhaqameed ee korontada ama qoraxda oo leh muuqaal kuleyliyaha laba-tamarta sawir leh. Waxay gaadhaa kulayl degdeg ah iyo heerkul joogto ah. Awooddeeda weyn ee 80 litir iyo hababka kontaroolada ee kala duwan ayaa sidoo kale u sahlaysa in la isticmaalo loona fududeeyo qubayska. Hagaag, dib u eegista maanta waa halkaan, marka hore waxaan aadaa qubeyska!
Hore:: Xogta Suuqa Qeybtii Koowaad ee Musqusha la safeeyey ayaa la siidaayay! Musqusha Kohler, Basin, Qubayska Saddexda Kaalinta Koowaad! Next: Huida Sanitary Ware: Dakhliga qeybtii hore ee sanadka wuxuu ahaa 1.743 Bilyan Yuan, koror ah 32.38% Sannadkii